I-Bargain Budget Bungalow enokubukwa Okumangazayo!
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Donlaya
Lena i-bungalow enhle yase-rustic esiqhingini esidumile sasePhi Phi. Sisenyakatho yeLoh Dalum Beach cishe imizuzu eyi-10 ukuya enkabeni yesiqhingi. Leli bungalow elimangalisayo linikeza ukubukwa kwe-AC nepharadesi ngaphesheya kolwandle nangaphesheya kwePhi Phi.
Uma ufuna umlingiswa ogelezayo we-rustic bungalow, osondele ngokwanele ukuze uzitike ngempilo yasebusuku kodwa ungashayi ngempama enkabeni yesiqhingi, ungabe usabheka okunye. Ngenani lale ndawo, asicabangi ukuthi iba ngcono!
Itholakala cishe amaminithi angu-10 ukusuka endaweni kanye nesevisi ye-shuttle yamahhala yezivakashi, labo abafuna ukubona isiqhingi, bazitike futhi bajabulele, ungabe usabheka okunye! Ngazo zonke izinsiza ongazilindela le indawo efanelekile ongahlala kuyo ku-Phi Phi! Lesi sakhiwo siza nombhede ophindwe kabili!
I-Phi Phi ingesinye seziqhingi ezidume kakhulu eThailand. Iheha abavakashi abavela kuzo zonke izigaba zempilo futhi kunezindawo zokulala ezihambisana nazo zonke izabelomali. Cishe sesibheke ekupheleni kwesabelomali salesi sikali singekho phakathi nendawo kodwa sesisondele ngokwanele. Intuthuko ibheke ngaseLoh Dalum Beach ngakho-ke kukhona okungaba nomsindo ebusuku.
Sinethimba elichwepheshile elikhuluma isiNgisi elilapha ukuze liphendule noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo ekuholele kuyo